Turkiga oo sheegay in Mareykanku dhabarka ka toogtay laakiin ay jilbaha dhigan doonin. – Xeernews24
Turkiga oo sheegay in Mareykanku dhabarka ka toogtay laakiin ay jilbaha dhigan doonin.
Talaabooyinka lagu doonayay in lagu qaboojiyo qalalaasaha dhaqaalaha ee Turkiga ayaa lagu soo waramayaa in uu guul daraystay iyada oo suuqyada ay aad u sabaynayaan.
Waxaa kale oo meel xun maraya muranka ka dhaxeeya Maraykanka iyo Turkiga, iyada oo madaxweyne Erdogan uu Maraykanka ku eedeeyay in uu “Dhabarka naga toogtay” waa sida uu hadalka u dhigaye.
Erdogan oo ka hadlayay shir jaraa’id oo uu ku qabtay Ankara ayuu yidhi “Dhinac waxaad ka muujinaysaan in aad tihiin garab noo haya iskaashi istaraatiiji ah, dhanka kalena xabbad ayaad kor noogu rideysaan”.
“Waxaan iskula jirnaa NATO, dhanka kale dhabarka ayaa toori naga galinaysaan” ayuu yidhi Erdogan.
Turkiga iyo Maraykanka waxa ay isku hayaan baadariga diinta masiixiga Andrew Brunson oo illaa 2016-kii ku xidhan dalka Turkiga, isaga oo ku eedeysan xidhiidh uu la yeeshay kooxaha Kurdiga iyo Gulen ee uu hoggaamiyo waddaadka Fatxullaah Gulen oo ku nool Pennysylvania, wadanka Maraykanka.
Labada dalka ee Turkiga iyo Maraykanka waxa ay ku wada jiraan gaashaanbuurta NATO, waxaana Turkiga ka furan saldhigga Incirlik ee xagga cirka oo NATO ay ka fuliso hawlgalada ka dhanka ah Daacish, waxaan jira culeesyo gudaha oo isa soo taraya oo Erdogan loogu baaqayo in uu xidho saldhiggaas.
Lacagta Turkiga ayaa hoos u dhacday 20% qiimihii looga kala sarifan jiray doolaarka. waxaa kale oo dhacday in suuqyada ay sabeeyeen.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2018/08/erdugan1.jpg 155 325 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2018-08-14 08:28:062018-08-14 08:28:06Turkiga oo sheegay in Mareykanku dhabarka ka toogtay laakiin ay jilbaha dhigan doonin.
Al-Jazeera oo daabacday Xog sir ah oo faddeexadaysay Sacuudiga iyo Imaaraad... Daawo Waaga Cusub ee u baryay Reer Jijiga iyo ESTvgii Cabdi Iley oo Qofwalba...